LEGO Harry Potter 76393 Harry Potter & Hermione ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
21 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 z ဇရ Wexler 372 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, ၇၅၉၇၉ Hedwig, ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, ၇၆၃၈၆ HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင်, 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger, 76394 Fawkes Dumbledore ရဲ့ Phoenix, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၏ကျောက်, Hermione granger, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, သေးသေးလေး, reviews, Ron Weasley, အဆိုပါ LEGO Group
76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger အဆိုပါများအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးဘေးထွက်စီမံကိန်းကိုကဲ့သို့ခံစားရ၏ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ theme - ဒါပေမယ့်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အက္ခရာတွေအတွက်အသစ်စက်စက်ပုံစံဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးမလား။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Lego ၂၀၂၀ တွင်အစက်အပြောက်တစ်ခုနှင့်ပြည့်သွားသောအခါအရာရာသည်မတူကွဲပြားတော့မည်ဟုအုပ်စုကကျွန်ုပ်တို့အားအချက်ပြရန်ကြိုးစားခဲ့သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အတူတန်းစီ ၇၅၉၇၉ Hedwigဒါပေမယ့်ဒီနွေရာသီဟာမျှော်လင့်ချက်အားလုံးအပေါ်သက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ slot ရှစ်ခု၏ထဲကတစ် ဦး ကဖလားကိုဖြတ်သုံးခုအတွက် Non- playsets အတူတက်ယူနေကြသည် 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ်; ၇၆၃၈၆ HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင် (ထိုအရာ, ဖြစ်ကောင်းတစ် ဦး '' playset 'ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်တကယ့်စစ်တုရင်အစုံ); နောက်ဆုံးဤပြန်လည်သုံးသပ်၏ဘာသာရပ်, 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger ။
၎င်းသည်ရိုးရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မျှသာမဟုတ်ပါ 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger အံ့သြဖွယ်မဆိုထက်ပိုမိုမြင့်မားအပိုင်းအစအရေအတွက်နှင့်စျေးနှုန်းမှာအတွက်နာရီ ဟယ်ရီပေါ်တာ မှတပါး 2018-2020 ကနေဖြန့်ချိအစုံ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်။ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် Hogw ထက်ပိုမိုကြီးမားပြီးစျေးကြီးသည်ဖြစ်စေဤပစ္စည်းကိုယုံကြည်ရမည်artဒါမှမဟုတ်သူတို့က bootleg Felix Felicis (အရည်ကံကောင်းခြင်းဟုခေါ်) သောက်နေခဲ့ကြပြီးအရောင်းကိန်းဂဏန်းများလှိမ့်သည့်အချိန်တွင်ဒါဟာဟောင်းနွမ်းသွားတော့မှာပါ။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကပထမဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အသေးစားပုံစံသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိပါသလား Lego အဖွဲ့ကဖြန့်ချိပြီလား ထိုခေါင်းစဉ်သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၃၇၂၃ အထိဖြစ်သည် Lego အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့ရပြီးဟယ်ရီနှင့်ဟာမီနီယန်တို့၏နှစ်ဆကျော်မြင့်သော Mini-Figure ။ သငျသညျထင်လျှင် Lego အရွယ်ရောက်သူများအတွက်displayရာမမျက်နှာပြင်ကိုထုတ်လွှင့်ရန် Group မှလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည် - ထပ်မံစဉ်းစားပါ။
ဒီနောက်ခံကိုစိတ်ထဲ ထား၍ လေ့လာကြည့်ရအောင် 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger သင်၏ငွေနှင့်သင့်ဝတ်လုံပေါ်တွင်နေရာတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်အမြဲတမ်းတိုးပွားလာနေသောအရေအတွက်ကိုဖော်ပြသည့်နေရာတိုင်းတွင်တန်ဖိုးရှိသည် Lego ခင်းကျင်းပြသထားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်း၏စိတ်ထဲတွင်မေးခွန်းကိုရလိမ့်မည် - Ron ဘယ်မှာလဲ။
theme: Lego Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား အမည်သတ်မှတ်မည် - 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 119.99 / $119.99 / € 129.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,673 အသေးစားပုံများ: 0
ရုံနဲ့တူ 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, အဘို့တည်ဆောက် 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger ပီတိဖြစ်စရာကောင်း။ ပညာရှိစွာဖြင့်စာအုပ်ငယ်နှစ်စုခွဲကာမိသားစု ၀ င်များအကြားတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံအတွက်စံပြဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်artners၊ friends, et al ။ သင်တည်ဆောက်မှုကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်မျှဝေချင်သည် ဟယ်ရီကိုကိုင်တွယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့အားလုံးထပ်မံလုပ်ရန်စိတ်ဓာတ်မများခဲ့၊ Hermione ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ပြန်မလာခင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထိုင်ခုံကိုထိုင်ခိုင်းသည်။
ဒါကဒီကြီးမားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရတာဟာမပျော်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 'ငါနှစ်ကြိမ်တကြိမ်လုပ်ချင်တာ' မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့စွမ်းအင်ကိုတစ်စက္ကန့်လောက်သွားကြည့်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံမှာသိသိသာသာခြားနားသွားတယ်။ ဟယ်ရီရဲ့လက်မောင်းချိတ်ဆက်မှုကသူ့ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အထည်အ ၀ တ်အစားအတွက်နေရာစွန့်ခွာရန်လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုလည်းရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆံပင်ကအရမ်းပျော်စရာကောင်းပြီးအကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်တယ်artသူတို့အတူတကွလာမှီတိုင်အောင်ကျပန်းကြည့်ရှုသောရှုပ်ထွေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးထားသည်။
ထိုကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခုအပြင်ဟယ်ရီနှင့် Hermione အတွက်တည်ဆောက်မှုများသည်တူညီစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြား part တစ် ဦး စံ၏ Lego Minifigure ကိုသီးခြားစီတည်ဆောက်ထားသည် - လက်ဝဲနှင့်လက်ယာခြေထောက်များ၊ တင်ပါးများ၊ ကိုယ်ထည်များ၊ လက်ဝဲနှင့်လက်ယာလက်များ၊ လက်တစ်ဖက်နှင့် ဦး ခေါင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ minifigure နှင့်မတူဘဲ ဦး ခေါင်းနှင့်ဆံပင်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို minifigure p ပုံတူကူးယူရန်ဤရွေးချယ်မှုart သီးခြားခွဲထုတ်။ ရသောဒြပ်စင်တစ်ခုအနေဖြင့်ချီးမွမ်းသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်reallyရာမ minifigure တစ်ခုကိုတကယ်တည်ဆောက်နေသည်ဟုခံစားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
တည်ဆောက်ရန်အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကိုပေးထားသောကြောင့်ခြေထောက်များတွင်အုတ်ခဲများပါ ၀ င်သည့်အပြင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်၎င်းမှာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အများကြီးနဲ့တူ 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ်, 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏နက်ရှိုင်းသောဗဟုသုတကိုပြသသည် Lego ဂျီသြမေတြီအဖြစ် Lego ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံး ၀ င်သောအုပ်စု၏ကျယ်ပြန့်သောစာရင်းartအသေးစိတ်နှင့်ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက် s ။
ထိုအတွင်းပိုင်းတည်ငြိမ်မှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပုံများသူတို့ကိုယ်တိုင်ကောက်ယူနိုင်သည်၊ လှည့်ပတ်သွားနိုင်သည်၊ အရာ ၀ တ္ထုများကိုကြောက်စရာမလိုဘဲ၊ ပြတ်တောက်သွားနိုင်သည့်အရာများကိုကြောက်ရွံ့စရာမလိုဘဲ၊art အတော်လေးလွယ်လွယ်ကူကူ။ သူတို့ရွေးချယ်ထားသည့်အရွယ်အစားမှာလည်းမှန်ကန်သည်ဟုခံစားရသည် - သူတို့သည်သင်ထင်မြင်သည်ထက်ပိုကြီးသည်၊ သို့သော်အလွန်ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားလွန်းလှသည်။ ပြီးတာနဲ့မော်ဒယ်များအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအသေးစားပုံ၏အထင်ကရရုပ်ပုံကိုအပြည့်အဝဖမ်းယူနိုင်သည်။
သို့သော်သူတို့သည်အသေးအမွှားရုပ်ပုံများနှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်း၎င်းတို့သည် ၁: ၁ (သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင် ၆း၁) တွင်သူတို့လုပ်ခဲ့ပြီးသောတိကျသောအသေးစားပုံတူပွားများမဟုတ်ပါ။ သူတို့၏ခေါင်းများနှင့်ဆံပင်များသည် Philosopher's Stone နှင့် Chamber of Secrets ၏အသေးစားဓာတ်ပုံများနှင့်အလွန်ကိုက်ညီသည်။ သို့သော်အပြောင်းအလဲများလုပ်ထားသည်မှာကြီးမားသောကိန်းဂဏန်းများသည်ခြေထောက်တိုတောင်းမည့်အစားပုံမှန်သေးငယ်သည့်ခြေထောက်များရှိသည်။ Hermione ဟာခြေထောက်တွေကမီးခိုးရောင်အစရှိသည်။ ဟယ်ရီမှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရင်ခွင်ရှိသည်။ ပရိသတ်များသည် Wizarding World ၏ဝတ်ရုံများ၊ Jedi ဝတ်ရုံများ၊ တုတ်ကျင်းများနှင့်အခြားအရာများအတွက်အသေးအဖွဲပုံစံဖြင့်ရရှိရန်သေလုနီးပါးဖြစ်နေသည်။
ဒီမတူကွဲပြားမှုများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကမရှိသေးတဲ့အသေးစားဓာတ်ပုံတွေကိုတိုးမြှင့်ပြသတယ်ဆိုတာပြသပေမယ့်ဒီဒီဇိုင်းကိုကြီးမားတဲ့ Display အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပြုဖို့လိုတယ်။ ဤအမျိုးအစား၏ပထမ ဦး ဆုံးအရာ၏ရွေ့လျားနေသောခြေထောက်များသည်မပျော်နိုင်ပါ။ ဟယ်ရီ၏ရင်ဘတ်ကြီးသည်ကြည့်။ ကြောက်လန့်နေသဖြင့်ဤအပြောင်းအလဲများသည်တရားမျှတပုံရသည်။ တစ်ခုမှာကံဆိုးရှုထောင့် is Minione ဟာသူမရဲ့ဆံပင်တွေကိုလမ်းလျှောက်နေလို့သူမရဲ့ခေါင်းကိုမဖွင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိခြင်းပဲ။
ဒီအစုတခုအပေါ်မှာဆွဲထားစရာကြီးမားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်၊ အဲဒါကတော့ - ဘာကြောင့် Harry နှင့် Hermione? သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်နှစ်ခုကိန်းဂဏန်းများမှာအားလုံး? ဇာတ်ကောင်များအနေဖြင့်ဟယ်ရီနှင့်ဟာမီနီယွန်တို့သည်သဘာ ၀ စုံတွဲတစ်စုံကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ သေချာတာပေါ့၊ သူတို့မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်မြင်ကွင်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ဟယ်ရီပေါ်တာမင်းဟယ်ရီနဲ့ရွန်ကိုမင်းထင်လိမ့်မယ်။ ပိုများသောအားဖြင့်, သင် (#JusticeForRon, မည်သူမဆို?) သင်ထင်လိမ့်မယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ Ron ပါဝင်သင့်ပြီးပေါင် ၁၈၀ ကုန်ကျသင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအဆောက်အအုံကိုဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြည့်ပြီးထိုင်လိုက်တာနဲ့သူဟာဟယ်ရီပဲပေါင် ၆၀ လောက်ကုန်ကျနိုင်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
ကြီးမားသောတည်ဆောက်နိုင်သောအရာဝတ္ထုတစ်စုံအနေဖြင့်၎င်းအစုံသည်ကစားခြင်းထက်ပြသရန်သူ့ဟာသူချေးငှားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုအသေးအဖွဲပုံစံတွေနဲ့ကစားနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ကလေးတွေဟာသူတို့ကိုkidsရာမအရုပ်တွေအဖြစ်သုံးနိုင်တယ်။ သို့သော် Lego Group ၏ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြချက်သည်ဤလှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်သွားပါကကလေးများသည်သူတို့၏အခန်းအတွက်မှော်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ချိန်ညှိထားသောမော်ဒယ်များကိုပုံဖော်နိုင်သည်။ Hogwartကျောင်းသားများကို ၄ င်းတို့ကိုအံ့အားသင့်စေရန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကစားခြင်းနှင့်ပြသခြင်းကိုပြုလုပ်ရန် friends။ "
ဤကျောင်းသားနှစ် ဦး ကိုပြသခြင်းသည်မူလတစ်ခုတည်းကိုသာပြခြင်းထက်သူတို့၏သူငယ်ချင်းရွန်ပျောက်ဆုံးနေသည်ထက်ပိုကောင်းသလား။ ဒီသုံးသပ်သူရဲ့အမြင်မှာ - မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပုံစံပုံစံ၏အောင်မြင်မှုကိုမြင်တွေ့လိုပြီးကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများတွင်ပေါ်ထွက်လာသည်။ သို့သော်စမ်းသပ်မှုအမှု၌ထူးဆန်းသောဇာတ်ကောင်များဖြစ်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်သွားလမ်းမှားမဟုတ်ပုံရသည်။ The Lego အုပ်စုသည်ဟယ်ရီကိုသာလွှတ်ပေးနိုင်ပြီးသူမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ သူမနှင့်သီးခြား Hermione နှင့် Ron တို့ဖြင့်သူနောက်ကို လိုက်၍ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်ဖြင့်စုဝေးခွင့်ကိုပေးခဲ့သည်။
Nil ဒါမှမဟုတ်အစုံတစ်ခုလုံးကိုလုပ်တဲ့နှစ်ခု။ မင်းအဲဒီလိုကြည့်ချင်ရင် အခြား display-oriented set များသည် stand များပါ ၀ င်ပြီး minifigure (သို့) နှစ်ခုပါ ၀ င်သော်လည်းဇာတ်ကောင်များသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြောသောကြောင့်ဤ set သည်သူတို့ကိုမလိုအပ်ပါ။ Plus အား, ဟယ်ရီနှင့် Hermione နှစ် ဦး စလုံးအပါအဝင်အခြားလက်ရှိအစုံ၏အိမ်ရှင်အတွက်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု (သူတို့မဟုတ်ရင်တောင် တိကျစွာ တူညီသောဗားရှင်း) ။
၎င်းတို့အတွက်မဟုတ်သော playset အားလုံးသည်အလွန်စျေးကြီးပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသည်art အချိုး။ 1,673 p နှင့်အတူart£ 119.99 အဘို့အ s / $119.99 / ယူရို ၁၂၉.၉၉ နှင့်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရလဒ်ကြီးသောမော်ဒယ်များသည်သင်ရရှိသောစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစရာမရှိပါ။ ယူရိုစျေးနှုန်းကအမြင့်ဆုံးအနေအထားတွင်ရှိနေသည်artမျှတသောယူရိုဇုန်နိုင်ငံများတွင်ယူရို ၁၂၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်အခြားဒေသများရှိကုန်ကျစရိတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ နာကျင်စေသည်။
စျေးနှုန်းဘက်တွင်တစ်ခုတည်းသောပြissueနာမှာသင်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာအတွက်သင်ပေးဆပ်ရသည့်အရာမဟုတ်ဘဲပထမနေရာတွင်ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုပါ ၀ င်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သောအသေးစားလေးတစ်ခုနှင့်ဈေးနှုန်းတစ်ဝက်သာရှိသောဤအစုံသည်၎င်းသည်တည်ရှိသည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသောအကြံပေးချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မှအသေးစားနှင့် Grawp နှင့်အရွယ်အစားနှိုင်းယှဉ် 75967 တားမြစ်ထားသောသစ်တော: Umbridge ၏ကြုံတွေ့ရ.
ဝိရောဓိ, 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger အပြည့်အဝထောက်ခံရန်ခက်ခဲသည်ဟုခံစားရသည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းမျိုးကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ အထင်ကရ Lego ငါတို့ရှိသမျှသည် သိ၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည့်အသေးစားပုံစံသည်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့်လှပစွာပုံဖော်ထားပြီးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကပြည့်စုံခြင်းကိုတွေ့မြင်ခြင်းကပျော်ရွှင်စေသည်။ ဒီဇိုင်းအားလုံး p ၏အများဆုံးစေသည်artခေါင်းကိုလည်ပင်းမှမျက်နှာသို့ခုန်သွားသည့်esidesရိယာ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှအလွန်အဆင်မပြေသောသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသောအရာများရှိသည်။ ၎င်းသည်အသေးစားရုပ်ပုံတစ်ပုံရွေ့လျားနိုင်သည့်အတွက်တောင်မှအနည်းငယ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည့်အနေအထားတွင်ရှိနေသည်၊ ထိုင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လှောင်ပြောင်ခံရနိုင်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ကြီးမားသောတည်ဆောက်နိုင်သောအသေးစားပုံစံတစ်ခုပါ ၀ င်သည့်အစုတစ်ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်လျှင်၎င်းသည် ၁၀/၁၀၊ ၁၀၀%၊ ကြယ်ငါးပွင့်ဖြစ်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါနှစ်ခုပါ။ နှစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း, အလုံးစုံအတွေ့အကြုံကိုပထမ ဦး ဆုံးအပြီး chore အနည်းငယ်သို့လှည့်။ ကြီးမားသောကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုကစျေးနှုန်းကိုသိသိသာသာတက်စေသည်။ အတန်ငယ်အတူတကွသွားပေမယ့်ခဲယဉ်းတစ် ဦး လုပ်သောဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး classic တွဲဖက်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသောရောင်းအားဖြစ်သည်။ သင်သည်ငွေအတွက်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းများကိုရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်မူရင်းရိုးရှင်းသောကစားနည်းများသို့မဟုတ်များပြားလှသောအခြားပြသမှုအပိုင်းများထက်အသေးအဖွဲဓာတ်ပုံများကိုကြီးကြီးမားမားသုံးရန်လိုသည်။ Lego Group သည်အခြားအပတ်တိုင်းတွင်လည်းကြေငြာသည်။ ဤမျှလောက်ကျိုးနပ်နှင့်အတူ Lego မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကြီးမားတဲ့အသေးစားဒီဇိုင်းကဒီကတိကိုအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာရှက်တယ်။
LEGO Harry Potter 76393 Harry Potter & Hermione Granger တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ?
ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတည်းကိုသာတည်ဆောက်ရန်တစ်နာရီခွဲခွဲကြာသည် 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Grangerဒါကြောင့်စုစုပေါင်းသုံးနာရီ၊ မင်းတို့ကသူတို့အနားမှာခဏနားပြီးအနားယူချင်လိမ့်မယ်။ Déjà vu သည်အချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
LEGO Harry Potter 76393 Harry Potter & Hermione Granger တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်း။
1,673 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione GrangerLEGOLAND ပန်းခြံများရှိစံပြစျေးဆိုင်များတွင်သာတည်ရှိခဲ့သောအလင်း nougat (အက္ခရာများ၏စံအသေးအဖွဲ၏ခေါင်းများနှင့်လက်များနှင့်အတူတူပင်အရောင်တူ) နံပါတ်အပါအ ၀ င်။
LEGO Harry Potter 76393 Harry Potter & Hermione Granger သည်မည်မျှကြီးသနည်း။
တစ်ခုချင်းစီကိုပုံ 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger အရှည် ၂၆.၅ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၁၇.၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆိုသက်ရောက်မှုများစွာရှိနိုင်သည်။
LEGO Harry Potter 76393 Harry Potter & Hermione Granger ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger ယူကေတွင်ပေါင် ၁၁၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၁၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၁၂၉.၉၉ မှစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးစျေးဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ လှိုင်း, နှင့်မဆိုထက်ပိုမိုစျေးကြီး ဟယ်ရီပေါ်တာ မှတပါး 2018-2020 ကနေအစုံ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်.
← Lego Marvel 76178 Daily Bugle - သင်မသိသောအရာငါးခု
LEGO MASTERS သည်နယူးဇီလန်သို့လာသည် →